R Kelly wuxuu qirtay dambiga lagu soo oogay oo dhan! - KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE R Kelly wuxuu qirtay dambiga lagu soo oogay oo dhan!
R Kelly wuxuu qirtay dambiga lagu soo oogay oo dhan!
TELES RELAY 6 August 2019
R Kelly xabsi ayuu ku jiraa. Marka hore, heesta leh malaayiin albums ayaa la iibiyay, waxaa lagu tuhmayaa inuu galmo la leeyahay caruurta aan qaan gaarin markuu da 'weynaa. Sidookale, qareenka dowlada dhexe ee Richard Richard Donoghue wuxuu amar ku bixiyay sii waditaankiisa inta maxkamad la saarayo.
Intaa waxaa sii dheer, Sanka R Kelly uma badna inuu dhammaado waqti dhow. Waa in la yidhaa dokumentiga noolaha ah ee 'Survive R Kelly', oo laga sii daayo kanaalka nolosha ayaa ka yaabiyay dunida oo dhan. Si kastaba ha noqotee, filimkan lixda qaybood wuxuu u muujiyey R. Kelly inuu yahay ugaarsade galmada dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, marag badan ayaa taageeray eedeymaha ka dhanka ah heesta. Dhibbane hore ayaa sharaxay:
"Waxaa jira heshiis ismiidaamin ah oo dadka intiisa kale ku daraya. Ma fadhiyi doono mana sii dayn doono hablahan. Waxaan ka mid ahaa gabdhahaas diyaar u ahaa inay is dilaan. "
Intaa waxaa sii dheer, cabashooyin badan ayaa la gudbiyay tan iyo sannadihii 90.
R Kelly wuxuu ku jiraa xabsi. Intaa waxaa dheer, wuxuu mar kale qirtay dambigaan Khamiista 1er August 2019 ee maxkamadda Federalka ee Brooklyn. Intaas waxaa sii dheer, qareenkiisa Douglas Anton wuxuu yiri:
« Haddii tani ay noqon lahayd qaabka ama shirkada ay dawladu iskudayayso inay gudbiso, waxaa jira shan koox koox ah oo aan khiyaanayn, oo aan ahayn dhamaantood oo la sheegay inay yar yar yihiin, kuwaas oo hadda muujinaya qoomamayn kooxeed sanado badan kadib.. "
Si kastaba ha noqotee, R. Kelly wuxuu dhib ku qabaa inuu qanciyo maxkamadda. Marka hore, waxaa lagu eedeeyey magaalada Brooklyn inuu ku kacay sharci-darro iyo ku xad-gudub sharci federaal ah oo ku saabsan ka ganacsiga dadka. Sidoo kale, Magaalada Chicago, loogu talagalay sawirrada qaawan ee carruurtu muujinayaan. Ugu dambeyntiina, Gobolka Cook County, Illinois, wuxuu ka shakiyay inuu si xun ula dhaqmay gabadh 13 ka weyne 16.
Gabagabadii, R. Kelly ayaa wajahaya xabsi daa’in!
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.culturebene.com/53247-r-kelly-a-plaide-non-coupable-pour-toutes-les-accusations-portees-contre-lui.html
Amiir Harry naxdin: "Kubadsameeyaha adduunka ugu fiican" wuxuu doonayey inuu diiwaan geliyo ka hor inta uusan la kulmin Meghan
Naxdin Royal: qaanuunka kaliya ee arki kara William iyo George waxay waayayaan xaquuqdooda carshiga
7h RTL 25 Agoosto 2019 - VIDEO
Waxaan u guuray meel cusub Roblox waana cabsi badan! - VIDEO
Joogitaanka Geneva waa "mid aan la daabicin, oo taariikhi ah"
Amiir Harry wuxuu aad uga xumaaday warkii naxdinta lahaa ee ku saabsan geerida saaxiib muddo dheer soo jirtay
India: Ardayda Leh ee Kaqeybgalka Nadaafada | Wararka Hindiya
aan caadi ahayn23
DADKA & LIFESTYLE3,374
Daawooyinka dabiiciga ah26
DIB U EEGID AFRICAN PRESS112
Video dheeraad ah1,435